Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Haweenka Aduunka oo lagu xusay London
Maalinta Haweenka Aduunka oo lagu xusay London
Posted by maamule1	/ April 2, 2011
Waxaa Shalay lagu qabtay shir balladhan xarunta jaalayidda Ogadenia ee London UK, Xafladaa oo aad loo soo agaasimay aya haweenka Ogadenia ugu dabaal degayeen maalinka Haweenka Adduunka. Shirkaas Waxaa ka soo qaybgaleen, Xubnaha ururka haweenka UK, madaxa Ururka dhallinyarada Ogadenia, xoghayaha Hoggaanka Arrimaha abaabulka iyo Bulshada JWXO, Xoghayaha Arrimaha Dibedda JWXO, iyo Xubno ka socday Ururka haweenka Somalia.
Waxaa shirka lagu furay aayado quraan ah ka dibna waxaa wacdi qiimo badan ka soo jeedisay Marwo Shugri Sh. Cali oo si qoto dheer uga hadashay marxalladda Ummadda Somaliyeed ay mareyso oo dhammaantood maanta gumaysiga Itoobiya uu gacanta ku dhigay sitoos iyo si dadbanba ay maanta u hoos tagaan Itobiya, iyo sida loogu baahan yahay in eebe loo noqdo oo caabudkiisa loo badiyo, xaqana loo taageero.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka marawo Rosa Cabdiraxman ayaa halkaas ka soo jeedisay qudbad qiimo badan oo dhinacyo badan taabanaysaa. Waxay halkaas ugu baaqday Dhammaan haweenka Ogadenya inay gacana halganka Xoreynta Ogaadenia ku taageeran gacana kaga shaqeeyaan horumarinta qadiyadda Dumar.
Waxaa kaloo halkaas ka hadashay marwo Ruqiyo Xuseen Aabi oo halkaas ku soo bandhigtay muhimadda ay maalinkan haweenka adduunkoo idil u leedahay, ayadoo taariikhda halganka haweenka adduunku u soo mareen suggidda xuquuda haweenka halkaas ka soo jeedisay iyo guud ahaan kaalinta Haweenka Soomaaliyeed ay ka qaataan horumarinta bulshada Soomaliyeed ama hala gumaysto ama xor ha ahaadaanee.
Waxaa kaloo halkaas gabay buraanbur ah oo aad u qiimo badan oo ay ku taageerayso halganka Somalida Ogadenia ka soo jeedisay xafladaas qiimaha badan Marwo Maryan jacayl oo ka socotay Ururka haweenka Somalia. Sidoo kale waxaa buraambur iyo guubaabo aad u qiimo badan soo bandhigtay marwo Koos shariif oo ku lebisnayd calanka.
Kaalinta ururka haweenka Ogadeeniyana waxaa aad uga hadashay Marwo Hibo Cali Malow. Sidoo kale kaalinta haweenka Somaliyeed ay kaga jireen halganka gobanimoodka waxaa aad u qaadaa-dhigtay Marwo Bilaad Adan Kukay.
Waxaa kaloo halkaas ka soo jeediyay khubado guubaabo ah oo dadku aad ugu diirsadeen Labada marwo ee kala ah Sooc Ahmed Nur iyo Casho-lul Xasan.
Xafladaas oo ka turjumaysay bisaylka ay gaadheen haweenka Soomaalida Ogadenia waxay noqotay mid dareenka iyo wacyiga Reer UK kor u qaaday.
dumarka ogadenia waa dumarka maanta dhibaatooyinka ugu badan ay haystaaan gumaysigu waxa uu u gaystaa gabood falo aad u foolxun oo kala duwan waana canbaaraynaynaa waana ka diriray naa waxaan leeyahay dumarka ogadenia wiilasha aad dhasheen ma ilawsana dhibaatada uu gumaysigu idinku hayo waana dareemaynaa xanunka waana idin lawadaagnaa difaaciina naftanada ayaan u huraynaa sidii kuwii naga horeeyey ama kuwa maanta qoriga wadaa waa inoo samir iyo in alle aan talo saarano waayo isaga ayaa inoo gargaari insha allee
waxaanmarkahore salaamayaadhamaan dumarkarerogadenya melwalbaow jogaan waxaan aadiyo aad ogu faraxsa nahay si da wanaagsan e u kudhamaadayshirka aad qabateen waarun maanta dhi baatada ogu badani waxay ku dhacdaa dumarkeena mar dhawna inshaa alaahwaynu kawadabixi gumaysigan mar kawaxaan lehay dhamaan rag iyo dumar aan gacanta isqabsano waynu kaguulaysan gaalkee hana lawada dul qaato waad mahadsan tihiin